Imtixaanka qoraalka ee laysanka oo lagu geli doono af soomaali - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Henrik Montgomery / Scanpix
Imtixaanka qoraalka ee laysanka oo lagu geli doono af soomaali
Af-soomaaliga iyo imtixaanka qoraalka ee dareewel-nimo
La daabacay torsdag 21 mars 2013 kl 13.11
Gacan haadin ay bixisay hayadda gaadiidka una haadisay wakaaladda transboorka iney kor u kaceen tirada soomaalida dalbata imtixaannada qoraalka ah ee laysanka baabuurta, iyaga oo weliba dalbada in loo qabto tarjubaan ka caawiya sidii ey ku geli lahaayeen. Waa mid uu dhaqale badan kaga baxo hayadda gaadiidka oo aan horay u soo marin. Sidaa daraadeed ayey wakaaladda Transboorku ku howlan tahay sidii loo tarjumi lahaa imtixaanka qoraalka ee laysanka gawaarida, waana howl la fileyo in la fuliyo ugu dambeyn kala guurka sannadkdaha 2013/2014, sida uu sheegay madaxa laanta imtixaannada qoraalka darawel-nimo ee wakaaladda kala-waarididda waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo transboorka Mikael Stenberg.
Shakhsigu uma baahna inuu luuqadda iswiidhishka si wanaagsan ugu hadlo kolka uu ku jiro imtixaanka laysanka gaadiidka, maadaama uu u baahan yahay oo keliya inuu wax un ka fahmi kar onammarada uu siineyo ruuxa gaariga kula jira ee imtixaanaya. Hase yeeshee waxaa ku adkaanaysa inuu galo imtixaanka qoraalka ee dareewal-nimo mar haddii aannu si wanaagsan u garaneyn luuqadda iswiidhishka ee imtixaanku ku qoran yahay, isla-markaana aanay luuqadda uu hab-samida ugu hadlaa ku jirin 12-ka luuqadood ee imtixaankaa lagu qaado, marka laga yimaado luuqadda iswiidhishka.
- Luuqadaha imtixaanka qoraalka ee dareewel-nimo maanta ku tarjuman ama lagu geli karo ayaa kala ah afafka: Albaanka, carabiga, saddexda luuqadood ee bks, ingiriiska, finishka, faransiiska, jarmalka, beershiyanka, ruushka, luuqadda kurdida ee suraani, isbaanishka iyo afka turkiga.
Luuqadda soomaaliga oo ka mid ah luuqadaha ugu waaweyn ee qoowmiyadaha kala duwan ee dalkan ku dhaqani ku hadlaan ayaan haddaba ka mid aheyn 12-ka luuqadood ee lagu qaado imtixaannada qoraalka ee laysanka dareewal-nimo sida aad horayba ugu maqlayseen. Middaasina oo caqabad ku noqon karta soomaalida dalkan ku dhaqan ee xiiseeyneysa sidii ey ku qaadan lahaayeen batantaha wadidda gawaarida. Waa maxay haddaba waxyaalaha hayaddu go’aankeeda ku saleeyso ee lagu doorto luuqadda lagu tarjumeyo imtixaanka, inkastoo aaney middaaasi ahayn waajib saaran wakaaladda iney falkaa ku tallaabsato sida uu noo sheegay Mikael Stenberg:
- In afaf kale lagu tarjumo imtixaanka ayay ugu wacan tahay arrin dhaqaale dhammaan luuqadaha laga hadleyo. Annaga ma ahan waajib na saaran inaan afaf kale ku tarjunno xaqiiqdii.
- Laakiin waxaa jira waajib saaran wakaaladda gaadiidka ee Trafikverket inay tarjubaan u qabato ciddii aan luuqadda iswiidhishka ku geli karin imtixaanka. Waana mid uu dhaqaale badan kaga baxo wakaaladda. Boqol ruux oo tarjubaanno loo qabto ayaa kifaaleeynaysa in imtixaanka oo dhan luuqaddaa lagu tarjumo.
Dalka Iswiidhen wuxuu ka mid yahey waddammada ugu yar caalamka oo ey ka dhacaan shilal gaadiid oo hor-seeda iney geeriyi ka dhalato, middaasina la oran karo iney sabab u yihiin arrimmo dhowr ah oo ey ka mid yihiin ammaanka iyo siyaasadda waddooyinka, xeerarka, wacyiga dareewallada iyo wixii la mid ah. Sannadkii 1985 ayey dalka ka dhaceen guud ahaan shilal gaarsiisan 15 929, iyadoona ey ku geeriyoodeen dadyoow gaarsiisan 695 ruux, halka ey sannadkii 2011 ey tirada ku geeriyootey shilal hoos u dhcdey middaasina oo gaarsiisneyd 292 ruux. Waana mid la oran karo in shakhsiga looga fadhiyo aqoon badan sidii uu ku gaari lahaa goolka ah inuu qaato laysanka gaadiidka, sida uu sheegay Mikael Stenberg:
- Marka ugu horeeysa waxaad u baahan tahay aqoon wanaagsan oo la xiriira wadidda gaariga iyo nidaamka waddooyinka, si aad uga guul gaarto inaad qaadato batantaha gawaarida lagu kaxeeyo. Dabadeed waxaa looga baahan yahay shakhsiga inuu dhiibo imtixaanka qoraalka ee laysanka oo haddii uu ku gudbo u sii gudbayo imtixaanka wadidda muddo laba bilood gudahood ah.
Waana midda hore ee qoraalka imtixaanka midda dhowaantan lagu qaadi doono luuqadda soomaaliga kolka lagu tarjumo imtixaankaa. Waxaa sidoo kale ka mid ah luuqadaha iyaguna ku soo biiri doona 12-kii luuqadood ee horay u jiray afafka taayga oo ay ku hadasho qoowmiyadda taaylaandeeska iyo afka tigreega ee looga hadlo geeska afrika qaasatan dalka Eriteriya.